သေးငယ်သော pixel pitch P1.5 သည် HD Led display ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
တရုတ်အသေးစား Pixel အသံ LED P1.5 UHD LED Display ၏ High-End အစည်းအဝေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကြော်ငြာခြင်း၏ပြသမှု catalog, လျှောက်လွှာရုံး UHD P1.5 LED မျက်နှာပြင်အစည်းအဝေးသည်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှပေးသောအတွင်းခန်းအစည်းအဝေးခန်းအတွက်
မိုးလုံလေလုံ 640X480 ရှေ့ပြုပြင်ခြင်း LED ပြသခြင်း
အဆိုပါထုတ်ကုန်သေ - သွန်းလူမီနီယံပြီးနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံမှိုဒီဇိုင်းကိုချမှတ်, display ratio 2:1, ရှေ့မျက်နှာစာပြုပြင်ခြင်းပုံစံ, အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်စိတ်ကြိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော Hard connection ports များကိုအသုံးပြုသည်, ပြည်တွင်းရေးမြင့်မားသောပေါင်းစည်းမှုဒီဇိုင်း, အခမဲ့ disassembly နှင့်ပရိသတ်, embedded hidden type အတင်းအကျပ် bracket. စက်တစ်ခုလုံး၏ကြီးမားသောအရွယ်အစားပေါင်းစပ်ခြင်းကအချိန်ကိုသက်သာစေသည်, အားထုတ်မှု, နှင့်ပစ္စည်း. လွှဲအမျိုးအစား Multi- Point အပူလွန်ကျူးအပေါက်လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်, တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော.
ရှေ့မျက်နှာစာအပြည့်အစုံသည်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း၏ပုံစံဖြစ်သည်. ရှေ့မျက်နှာစာအပြည့်အစုံသည်သေးငယ်သောအကွာအဝေးအတွက်အလွန်လိုအပ်သောအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ၎င်းသည်တပ်ဆင်မှုအထူကိုထိရောက်စွာအာမခံပေးနိုင်သည်, နှင့်နံရံ၏အထူ 60mm ကဲ့သို့ပါးလွှာနိုင်ပါတယ်, ထုတ်ကုန်များကိုဖုန်မှုန့်များစုဆောင်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကာအကွယ်ပေးနိုင်သောအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် PCB ဘုတ်များပျက်စီးခြင်းသည်မီးဘေးကာကွယ်ရေးနှင့်လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိုသေချာစေသည်.
အသေးစားနှင့်အသေးစား 480 * 640 AND 480 * 480 ရောနှော AND MATCH
ကြီးမားပြီးသေးငယ်သည့်ဒီဇိုင်းသည်အလျားလိုက်ရောစပ်ခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်, ကြီးမားသောယူနစ်: အမြင့်: 480မီလီမီတာ, width: 960မီလီမီတာ, သေးငယ်တဲ့ယူနစ်: အမြင့်: 480မီလီမီတာ, width: 480မီလီမီတာ.
ရောနှောခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသောဒီဇိုင်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဆင်မှု၏အရွယ်အစားညှိနှိုင်းမှု၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုသေချာစေသည်, ဒေါင်လိုက်ကိုထောကျပံ့ 1/2 ယူနစ် splicing, အဆိုပါယူနစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုထောကျပံ့, နှင့်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဆင်ခကုန်ကျစရိတ် minimize
မိုးလုံလေလုံ 960x480mm Die-Cast Front ဝန်ဆောင်မှု LED Display Parameter
Pixel Configuration SMD1010 SMD1212 SMD1515
သိပ်သည်းဆ (Pixels / ㎡) 660,625 401,111 284,444
module resolution ကို (Pixel) 186×186 152×152 128×128
module အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) 240×240 240×240 240×240
မောင်းနှင်မှုစနစ် (တာဝန်) 1/62 1/51 1/64
ဤနေရာတွင် & WhatsApp ကျွန်တော်တို့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုထားခဲ့ပါ: +86 13714518751 & အီးမေးလ်: sales@hyte-led.com
nationstar သည် ၃၈၄၀ ဟတ်နှုန်းမြင့်သောလန်းဆန်းမှုနှုန်း ၁.၅၆ မိုးလုံလေလုံငှားရမ်းမှုတွင်ဖော်ပြသောစျေးနှုန်းကိုဖော်ပြသည်
မြင့်မားသော Refresh မြင့်မားသော resolution ဖြင့်မိုးလုံလေလုံ P1.875 P2 P2.5 Led ကြော်ငြာခြင်း